Israel dia nametraka fironana manaitra vaovao amin'ny fanidiana ny fizahan-tany ho an'ireo mpandeha vaksiny |
Home » Lahatsoratra » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » Vaovao momba ny dia any Israely » Israel dia nametraka fironana manaitra vaovao amin'ny fanidiana ny fizahan-tany ho an'ireo mpandeha vaksiny
Vaovao momba ny fiaramanidina • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Raharaham-panjakana • Vaovao momba ny indostrian'ny fandraisam-bahiny • Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena • Vaovao momba ny dia any Israely • Other • fanarenana ny dia • Safety • Vaovao momba ny fizahantany • Dinika fizahan-tany • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Tsiambaratelo momba ny dia • Vaovao mivalona
Israel dia nametraka fironana manaitra vaovao amin'ny fanidiana ny fizahan-tany ho an'ireo mpandeha vaksiny
Israel dia nametraka fironana vaovao manaitra
Saika vita vaksiny tanteraka i Israel. Saika hanomboka ny fizahan-tany iraisam-pirenena ny 1 jolay. Ny fahitana vaovao mifandraika amin'ny Delta mampidi-doza an'ny virus COVID dia nanosika ny fanjakana jiosy hanafoana ny daty fanokafana nankalazana ireo mpitsangatsangana iraisam-pirenena hitsidika an'i Israel.
Ny sidina avy any Etazonia mankany Israel dia voavidy mafy amin'ny volana Jolay. Ireo trano fandraisam-bahiny any Tel Aviv sy i Jerosalema voalohany dia manana taha ambony amin'ny famandrihana miaraka amin'ireo mpizahatany antenaina ho tonga avy any Etazonia.
Israel dia nanao fanambarana lehibe nankalazana ny fisokafan'ny fanjakana jiosy ho fizahan-tany ho an'ireo mpitsidika vita vaksiny. Nahatonga fanambarana mitovy amin'izany nataon'ny firenen-kafa.
Androany, Israel Media dia nitatitra fa ny mpizahatany vahiny vita vaksiny dia tsy avela hiditra ao Israely alohan'ny aogositra 1. Fahitana vaovao momba ny delta Delta mampidi-doza dia manemotra ny fisokafan'ny firenena indray. Mety hiteraka fironana any amin'ny faritra hafa eto amin'izao tontolo izao izany.
Nanapa-kevitra ny governemanta praiminisitra Naftali Bennett androany Alarobia, satria miatrika fitomboan'ny tranga coronavirus i Israel hanovana ny paikadim-pitaterana misokatra ho an'ny firenena. Ho fanampin'izay, ny adidy amin'ny fanaovana sarontava ao anaty trano dia haverina raha toa ka mihoatra ny 100 mandritra ny herinandro ny tranga isan'andro.
"Ny tanjontsika amin'izao fotoana izao, voalohany ary lehibe indrindra dia ny hiarovana ny olom-pirenenan'Israely amin'ny delta variant izay masiaka erak'izao tontolo izao," hoy i Bennett tamin'ny fampitam-baovao avy any an-toerana. “Mandritra izany fotoana izany dia tianay ny hampihena araka izay tratra ny fanakorontanana amin'ny fiainana andavanandro ao amin'ny firenena. Noho izany, nanapa-kevitra izahay fa hiasa faran'izay haingana araka izay tratra - amin'izao fotoana izao - mba tsy handoa vidiny mavesatra kokoa any aoriana, amin'ny alàlan'ny fandraisana andraikitra tompon'andraikitra sy haingana. Anjarantsika izany. Raha manaraka ny lalàna sy mandray andraikitra isika, dia hahita fahombiazana. ”
Ireo mpizahatany vita vaksiny dia noheverina ho navela niditra teto amin'ny firenena nanomboka ny 1 Jolay. Nambara izany tamin'ny a drafitra fanarenana ny fizahan-tany.
Tao anatin'ny andro vitsivitsy izay, ny firenena dia tratry ny variana Delta, ka nahatonga ny fitomboan'ny areti-mifindra amin'ny tanàna toa an'i Modi'in sy Binyamina.
Ny fanapahan-kevitry ny manampahefana israeliana izay fantatra fa mametraka ny fiarovana ny olom-pireneny voalohany foana dia mety hiteraka fironana amin'ireo toeran-tany fizahan-tany hafa manerantany. Mety hampitombo ny fameperana ho an'ny mpizahatany tonga izany, na eo aza ny fiheverana fa ny vaksiny no lakilen'ny volamena amin'ny indostrian'ny fizahan-tany sy fizahan-tany.
Misy tranga mavitrika 554 ao amin'ny firenena amin'izao fotoana izao. Ny isany dia nidina ho ambany noho ny 200. Tamin'ny firaketana ny ririnina lasa teo, dia nihoatra ny 85,000 ny isan'izy ireo.
Taorian'ny valanaretina ankehitriny sy ny tolo-kevitra vaovao omen'ny manampahefana ny fanaovana vaksiny ny zaza rehetra 12-15 taona, dia fitifitra maherin'ny 7,000 no notanterahina ny talata, avo indrindra tao anatin'ny iray volana. 4,000 eo ho eo amin'izy ireo no fatra voalohany amin'ny ankizy, manodidina ny avo roa heny ny isan'ny andro teo aloha.
Mba hiatrehana io valanaretina vaovao io dia nanapa-kevitra ny governemanta fa hametraka kabinetra vaovao momba ny virus coronavirus, ao anatin'izany i Bennett, ny minisitry ny fahasalamana Nitzan Horowitz, ny minisitry ny raharaham-bahiny Yair Lapid, ny minisitry ny fiarovana Benny Gantz, ny minisitry ny vola Avigdor Liberman, ny minisitry ny fitsarana Gideon Sa'ar ary ny minisitry ny atitany Ayelet Shaked , ary koa ireo minisitra hafa.
Ny marainan'ny andro dia nanambara ny Minisiteran'ny Fahasalamana fa amin'ny toe-javatra manokana dia azo baikoina hiditra amin'ny quarantine ireo olona vita vaksiny na sitrana.
Araka ny lalàna mifehy ankehitriny, ireo olona heverina fa voanona tanteraka (herinandro aorian'ny fitifirana faharoa na taorian'ny nahasitranany ny aretina) dia tsy afa-mitoka-monina raha mifandray amin'ny mitondra virus fantatra.
Na izany aza, araka ny toromarika vaovao nosoniavin'ny talen'ny jeneralin'ny minisitera Chezy Levy, ny tale jeneraly, ny mpitsabo amin'ny distrika, na ny lehiben'ny sampandraharaham-pahasalamana ho an'ny besinimaro dia afaka mitaky ireo olona ireo hitokana raha nifandray tamin'ny olona iray voan'ny aretina izy ireo. miaraka amina karazana viriosy izay heverina ho mampidi-doza indrindra na miaraka amina hetsika iray izay misy fiatraikany mafy mahatsiravina. Mety mila mitokana koa izy ireo raha mifanerasera matetika amin'ny mponina atahorana na tsy vita vaksiny, na raha manidina amin'ny fiaramanidina mitovy amin'ny mitondra coronavirus fantatra izy ireo. Ho fanampin'izay, ny toromarika vaovao dia mamerina ny adidy hisaron-tava. ny seranam-piaramanidina sy amin'ny toeram-pitsaboana.
Nanome toky ihany koa ny minisitra fa ny olana ara-pitaovana ao amin'ny toeram-pitsapana ao amin'ny seranam-piaramanidina Ben-Gurion - izay ny zoma lasa teo dia olona 2,800 no tonga mody nefa tsy nosedraina, araka ny takiana amin'ireo rehetra izay tonga tany Israel - voavaha, ary ny fampiharana ny lalàna mifehy ny dia an-dalam-pandrosoana.
Ireo Isiraeliana izay manidina any amin'ny firenena ambanin'ny fandraràna ny dia - amin'izao fotoana izao i Arzantina, Brezila, India, Rosia ary Afrika Atsimo - nefa tsy nahazo alalana avy amin'ny komity governemanta manokana natokana ho amin'izany tanjona izany, dia hosaziana ankehitriny.
Vaovao farany momba ny https://israel.travel/